Yuusuf Garaad oo si weyn loogu soo dhoweeyay Muqdisho “Sawiro” | Warfaafiye
Warfaafiye Somali News	Yuusuf Garaad oo si weyn loogu soo dhoweeyay Muqdisho “Sawiro”
Madaxiii Idaacadda BBC Laanteeda afka Soomaaliga ee xilka iska casilay Yuusuf Garaad ayaa maanta magaalada Muqdiso si weyn loogu soo dhoweeyay.
Soo dhoweynta Yuusuf Garaad ayaa waxaa ka qeyb qaatay dadweyne fara badan, Wariyeyaal, Saxafiyiin iyo dhalinyaro Soomaaliyeed.
Yusuf Gaarad markii uu kasoo degay garoonka wuxuu hadal kooban siiyay Saxaafadda isagoo sheegay in uu bilaabi doono wada tashiyo ku aadan aayahiisa siyaasadeed isla markaana uu kadib ku dhawaaqi doono inuu isa soo sharaxayo iyo in kale, balse go’aan cad oo uu weli gaaray oo ku aadan musharaxnimadiisa ma sheegin.
Wuxuu ka hadlay dilalka iyo qatarta lagu hayo saxafiyiinta Soomaaliyeed, isaga oo sheegay in maalin un lasoo qaban doono kooxaha falalkaasi guracan geysanayo.
Qaabka loo soo dhoweeyay kama duwaneyn qaababka kale ee Musharaxiinta, iyadoo Baabuurta ka qeyb qaadaneysay soo dhoweyntiisa qaarkood ayaa waxa ku dhaganaa sawirada Yusuf Garaad sidoo kalana waxaa la arkayay sawiradiisa oo ku dhagan qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho.
Qurbaawi Uk says: August 10, 2012 at 11:50 pm / Meeshaan waxaa kamuuqata Mooryaanimadii London uu kalatagay oo uu Muqdisho lategey Dhinaciisa mooryaan Indhacade ayaa kamuuqda ma sidaas ayuu Musharax kuyahay?